Ogaden News Agency (ONA) – Diyaargarowga martigalinta shirweynaha jaaliyadaha Ogadenya oo si habsami uga socda Canada
Diyaargarowga martigalinta shirweynaha jaaliyadaha Ogadenya oo si habsami uga socda Canada
Posted by ONA Admin	/ January 9, 2012
Shirar is-dabajoog ah oo jaaliyadda Ogadenya eeCanadaay kaga arinasanyeen martigalinta shirweynaha Jaaliyadaha Ogadenya ayaa lagu qabtay magaaladaOntario. Shirkan oo si habsami ah loo soo abaabulay oo jaaliyadaha Ottawa, Kitchener, Hamiltion, Windsor iyo Toronto, Ontario ayay dadkii soo buux dhaafiyeen hall-kii shirka loogu talagalay shirka. Arima badan ayaa looga arinsanayay shirka ay ka mid tahay ugu horeeysay in jaaliyadda Ontario la wargaliyo barnaamijka iyo diyaargarowga shir sanadeedka Jaaliyadaha Ogadenya oo sanadkan lagu qaban doono Canada.
Sidoo kale inay xubnaha jaaliyadda ra’yigooda ka dhiibtaan sidii shirka sanadkan uu u noqon lahaa mid taabagal ah oo ka heersareeya kuwii ka horeeyay. Waxaa ajendaha shirka ka mid ahaa in Dr. Cabdiraxmaan Yusuf oo ah madaxa Hya’dda daryeelka Agoonta (Ogaden Agency for the Welfare of the Orphans and the Sick) uu uga warbixiyo jaaliyadda xaaladda ay ku sugan yihiin agoonta iyo arima ku saabasan halganka Ogadenya.
Waxaa shirka furay gudoomiyaha jaaliyadda Toronto mudane Maxamad Cumar (Najib) oo hadal aad u qiimi badan ka jeediyay goobta una sheegay dadkii ka soo qabgalay shirka inay jaaliyadda Toronto diyaar u tahay shirweynaha jaaliyadaha ee sanadkan iyagoo arimaha dhaqaalaha shirka ku saabsan ay kala kaashan doona jaaliyadda Albert.
Ka dib waxaa lagu soo dhaweeyay codbaahiyaha sheikh Cabdi Shaafi oo wacdi diini ah u jeediyay shirka isagoo ku dhiirigaliyay xubnaha jaaliyadaha Canada inay qayb fiican ka qaataan sidii dhibaatada dadkooda haysta wax looga qaban lahaa. Waxaa kaloo shirka ka hadlay ku-xigeenka gudoomiyaha Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenya mudane Maxamud Axmad oo ka soo noqday Jimcihii kal-fadhigii ururka OYSU. Wuxuu Maxamad warbixin dheer ka siiyay dadkii shirka joogay guulihii uu kalfadhiga dhalinyarada ku soo dhamaaday iyo waxyaabihii dhalinyarada u qabsoomay sanadakii tagay.
Intaa ka dib ayuu shirka ku soo dhaweeyay Prof. Maxamad Xassan oo ah gudoomiyaha qabanqaabada shirweynaha jaaliyadaha ee sanadkan. Prof. Maxamad wuxuu la wadaagay jaaliyaddaOntariogo’aanadii ka soo baxay shirkii ay ku qabatay Edminton jaaliyadda Albert.
Wuxuu ku wargaliyay dadweynaha shirka fadhiyay doorka ay jaaliyadda Albert ka qaadan doonto xag dhaqaale iyo xag dhiirigalinba shirweynaha sanadkan suu u noqon lahaa mid guul ku dhamaada. Wuxuu gudoomiyaha qaban-qaabada shirweynaha xogwaran ka siiyay dadweynihii shirka isugu yimid waxyaabaha u qabsoomay guddiga qaban-qaabada ilaa hadda iyo heerka uu marayo diyaargarowga, xagga hoteekada, goobta shirka, maalin cilmi ahaan ah looga hadli doono (academic day venue). Wuxuu u sheegay dadkii shirka yimid sida ay qaban-qaabiyaasha shirweynaha ugu hanweyn yihiin martigalinta shirweynaha reer Ontario ee sanadkan.
Dr. Cabdiraxmaan Yusuf ayaa ku xigay Prof. Maxamad oo shirka uga mahanaqay siday ugu adkaysteen qabowga jira oy uga soo qaybgaleen. Wuxuu uga waramay dadweymihii fadhiyay shirka waxqabadkii haya’diisa iyo siday u gargaaraan agoonta iyo dadka xanuunsanaya ama dhaawaca ah ee ku soo waxyeeloobay Ogadenya. Wuxuu kaloo ka warbixiyay arimihii ugu dambeeyay Ogadenya iyo xogta uu ka hayo, isagoo kula dardaarmay dadkii shirka joogay inay xoojiyaan dadaalka loogu jiro xoreynta dalkoodii hooyo.
Waxaa kaloo meesha hadal qiimi leh ka jeedisay Gudoomiyaha Ururka Haweenka marwo Xaliima Cabdqaadir oo xasuusisay dadkii ka soo qaybgalay shirka sida loogu baahanyahay midnimada in la xoojiyo. Waxay sheegtay gudoomiyaha haweenka inay diyaar garoobeen haweenkaCanadashirweynaha Jaaliyadaha ee sanadkan oy qayb libaax ka qaadan doonaan hirgalinta shirweynahaa. Cibaado Xaaji oo aad looga yaqaano gobolka ahna shaqsiyad aad u taageerta halganka iyo jaaliyadda ayaa ku xigtay marwo Xaliimo oo markay hadalka qaadatay uu si weyn isu badalay jawigii shirka. Waxay ka warbixisay marwo Cibaado siday haweenkaOntarioisugu diyaariyeen shirweynaha sanadkan. Iyadoo hadalo guubaaba ah ka sheegtay goobta ayay xasuusisay dadkii meesha joogay inay haweenka kaligood dusha u ridan doonaan dhaqaalaha ku baxaya shirweynahaa hadday ragga ka soo bixi waayaan balanta ay qaadaan.
Hadaladii ka dib ayaa dadweynaha loo furay inay talooyinkooda soo jeediyaan iyo wixii su’aala ah oy qabaan. Kuwii fursadda u helay ayaana afkaaro wanwaanagsan iyo talooyin wax ku ool ah soo jeediyay oo qaban-qaabiyaasha shirweynaha ay tixgalin doonaan.
Shirka ayaa guul iyo is-afgarad ku soo dhamaaday.